PressReader - Isolezwe: 2019-01-11 - Iwubukhosi bodwa uma ihamba edolobheni le Polo
Iwubukhosi bodwa uma ihamba edolobheni le Polo
Isuka ekhasini 4 SISAHAMBE ibanga elincane sima e-robhothini, iyazicisha imakwabo. Angithi yenzela ukuthi yonge uphethroli kodwa uma sengisuka ithatha isikhashana ngaphambi kokuthi isuke. Noma ngihamba esiminyaminyeni iyashesha ukufuna ukuzicisha.
Kuyangicasula-ke lokhu. Ngenhlanhla ngiyakwazi ukukuvala ukuthi izicishe ngebhathini eliseduze negiya. UDisemba wonke angisakhohlwa, uma ngike ngashaya ukhiye nje ngiyayivala ukuthi izicishe uma ima.
Uhambo lwethu ngiyayizwa ukuthi intofontofo futhi okuhle wukuthi u-gearbox uyi-7 speed DSG, angilokhu ngishintsha amagiya. Ayazishibilikela futhi lo gearbox uyazi ukuthi yiliphi igiya elidingakalayo, ngasiphi isikhathi. Awuzwa noma isishintsha.
Indlela esihamba ngayo bayathuka uma ngibatshela ukuthi injini ingu-1.0 litre. Amandla ewafuqayo angu-70 kW netorque engu-175 Nm.
Akukho okiyizinkomba zokuthi injini incane njengoba izihambela kahle emgwaqweni. Uma isuka uyayizwa ukuthi akusiyo imoto yejubane njengoa ingavele igxume ihlale nokufakazelwa wukuthi ukusuka ku-0 iye ku-100km/h kuyithatha imizuzwana engu-10.8.
Singena kuthelawayeka u-120km/h iwubamba ngo-2 600rpm okuyenza ingabi namsindo ngaphakathi futhi iwuphuze kancane nophethroli.
Bathi isebenzisa amalitha angu-4.7 ngo-100km kodwa ngihluleke ngancama ukuthola lezi zinombolo zonke izinsuku esizichithile.
Kunalokho bengidlalela ko-6.3 litres nokuyinto engakhalisi kangako. Bheka ngoba uhambo lwami ngiluphothula ngemuva kokuhamba u-1 000 km.
Izibalo zithi ngisebenzise uR1 136.82 kuphethroli futhi ukuyigcwalisa kungidle uR528.42 usuphelile njengoba ithangi layo lingu-40 litres. Uthe ungakapheli ngagcwalisa ngoR408.40 ngaphinda futhi ngafaka uR200. Ingitshela ukuthi ngisengahamba u-310km.
Uyabona ukuthi uhambo lwami lude kodwa alukhathazi kangako ngoba kunendawo yokuphumuza ingalo phakathi nendawo futhi ine cruise control.
Nami ngilokhu ngiphumula ngoba iyangitshela ukuthi angihlabe ikhefu.
Ngaphandle kwalolu hambo lwami ziningi ezinye izindawo engizishayelile ngaphandle kwenkinga futhi iwubukhosi uma uhamba edolobheni ngoba ayinkulu futhi ugearbox uyazishintsha.
Indaba iba uma sekufanele upake ngoba amasensor ayinawo, kumele uthi thasi imadlana ukuze uwathole.
Ukujika kalula kwesitering kwenza kungabi yinkinga etheni yize ngincamela ukuthi ingitshele uma sengizoshayisa kunokulokhu ngiqalaza.
Ngingasho ngithi labo abathenga amaPolo basuke bengayilahli imali ngoba yimoto ephelele. Nokho kumele uqonde ukuthi ezinye zezinto ezikule esihamba ngayo kumele ufake imali ethe xaxa ukuze uzithole nokugcina sekunyusa inani lemoto. Inani - R292,200.00 Uma ufuna ifane ncamashi nesihamba ngayo inani licishe lifinyelele kuR333 500
Iphuma ne-warranty yeminyaka emithathu noma u-120 000k ne-service plan yeminyaka emithathu noma u-45 000km. Kumele uyise kwisevisi ngemuva kokuhamba u-15 000km